Archive du 20190628
CAN 2019 Lasa izao, nandresy ny BAREA
Mbola mitohy ny fametrahan’ny Barea Malagasy tantara eo amin’ny fifaninanana CAN « Coupe d’Afrique des Nations » eo amin’ny sehatry ny baolina kitra.
Fifidianana tao Mampikony “Nandika lalàna ny kandida N°4”
Manomboka mifoha indray ny karazana fifanolanana sy fampibaribariana fa tena nisy ny hosoka na fandikan-dalàna ny fifidianana, toy ny tao Mampikony.
Fifidianana ben’ny tanàna 3 hetsy hatramin’ny 5 tapitrisa ny anto-bola
Taorian’ny fangatahan’ny fitondram-panjakana tamin’ny alalan’ny minisiteran’ny Atitany, dia nandray fanapahan-kevitra momba fanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina monisipaly ny avy amin’ny Vaomiera miantsoroka ny fifidianana na ny CENI.
Antanifotsy - Vakinankaratra Mampiteny ny anarany ny IRD
Taorian’ny fankalazana ny tsingerintaona faha-59 niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, miakatra ny feo avy any amin’ny faritra amin’ny fihetsika ataon’ireo solontenam-panjakana sasany sy ireo mpanao politika mpomba ny fitondrana amin’ny tsindry ataon’izy ireo.
Diplaomasia Malagasy Mampanahy ny ho aviny
Ny fetim-pirenena dia midika fa tsy ambany ziogan’ny mpanjanatany intsony isika, hoy ny sekretera nasionalin’ny antoko politika ABA, Dany Rakotoson.
Taratasin’i Jean Vavaka mihambahamba
Salama tsara ve ianao ry Jean ? Miala tsiny aloha raha manontany anao an’izany fa tena lasa ihany ny saina nihaino anao omaly e !
Faty olona teny Mahamasina « Akaro fitsarana ny tompon’antoka»
Namoaka fanambarana mahakasika ny loza tetsy Mahamasina ny avy amin’ny Antoko Kintana sy ny CRN omaly alakamisy 27 jona. Manalasala ny zavatra misy.
Lalao Ravalomanana Nankahery sy nanampy ireo tra-doza
Nampahery ireo maratra sy ny fianakaviana manana havana namoy ny ainy, noho ny zava-nitranga tetsy Mahamasina ny takarivan’ny 26 jona ny fiadidian’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra notarihan’ny ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy akaiky.
Maty sy naratra teny Mahamasina Ny loha, tratra, kibo no tena voa mafy
Miisa 38 hatramin’ny omaly ireo maratra vokatry ny fifanosehana sy ny hitsaka nahazo azy tetsy Mahamasina mbola tazonina etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha, raha araka ny fanazavan’ny profesora Rakoto Alison Olivat.
Franck Rajaonarisamba Tsy misy ekipa madinika izany intsony miatrika ny CAN
“Efa tena mivoatra ny ekipa rehetra miatrika ny CAN Egypte 2019, hoy i Franck Rajaonarisamba mpanazatra nasionaly Malagasy manana ny “Licence A”
Hazakazaka manani-bohitra Hotontosaina rahampitso 29 jona ny andiany faha-2
Hotanterahina rahampitso 29 jona 2019 ny andiany faha-2 amin’ny hazakazaka manani-bohitra hampitohy ny kianjan’Alarobia Antananarivo sy ny tanànan’Ambohimanga mandalo ny digin’i Laniera sy ny tendrombohitra Rakotomaditra.
Mila fandinihan-tena !
Tahaka ny làlam-piainan’ny zanak’olombelona no zavatra lalovan’ny firenena amin’izao fotoana izao.
Fitondran-tena sy fahaiza-miaina Malagasy maro no mbola mila fanabeazana
Fetim-pirenena nihosin-dra no nandraisana ny 26 jona tamin`ity taona ity. Loza sy faty olona no niafaran`ny fety, vokatry ny fifanosehana teo am-bavahady hijery “podium” tao Mahamasina.
Fitrandrahana « Gaz » sy « Pétrole » Hanao fifanarahana ny Equato-Guinéen sy ny sinoa
Miketrika mafy hitrandraka « pétrole » sy « gaz » any Guinée Equatoriale ry zareo sinoa amin’izao fotoana izao, ary tena mifandray tanteraka ny tadin-dokanga eo amin’ny firenena roa tonta.
Raharaha Rohingyas ao Birmania Hanokatra fanadihadiana manokana ny CPI
Nanapa-kevitra ny fampanoavana eo anivon`ny Fitsarana iraisam-pirenena fa hanokatra fanadihadiana manokana manoloana ny famindran-toerana (deportation) natao tamin`ireo Rohingyas miisa 740 000 tao Birmanie.
Kaominina Talatamaty Niavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 jona
Toy ireo kaominina hafa manodidina dia nankalaza ny fetim-pirenena 26 jona tao anatin’ny hafaliana tanteraka ny kaominina Talatamaty. Niavaka ny hetsika raha oharina tamin’ny taon-dasa.
Famerana ny fikirakirana ny vola Tombony ho an’ny toekarena
Hitondra tombontsoa lehibe ho an’i Madagasikara ny fampidinana ny fikirakirana ny vola amin’ny sehatra rehetra, hoy ny minisitry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra,
Tetikasa e-paiement Hamaha ny olan’ny mpiasam-panjakana
Hotanterahina amin'ity taona ity ny tetikasa e-paiement mba hanamavainana ny fahasahiranan'ny mpiasam-panjakana. Fandoavam-bola amin'ny alalan'ny aterineto sy ny finday atao ary efa eo am-pamolavolana izany ny avy ao amin'ny minisiteran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola.
Fiatrehana voina sy loza tampoka Mbola marefo i Madagasikara
Notanterahina teto amintsika nanomboka omaly alakamisu 27 jona ny fivoriana siantifika andiany fahasivy nataon’ny firenena anatin’ny ranomasimbe indianina mahakasika ny fiatrehana ny voina na loza tampoka.
Lozam-pifamoivoizana Tsiroanomandidy Mpandeha 6 maty nitsahan’ny fiarabe nikorisa tampoka
Nitrangana loza mahatsiravina tao Andranovelona, kaominina Soanierana, distrikan’i Tsiroanomandidy, afak’omaly alina tamin’ny 10 ora latsaka kely.
Fetim-pirenena Polisy iray sy sivily 73 voasambotra …
Araka ny fampitam-baovao ofisialin’ny polisim-pirenena, nahatra 9 ny lozam-pifamoivoizana voarain’ny BAC.
Fiarovana ny ain’ny mpitandro filaminana Afaka manadio ny kizo amin’ny tifi-davitra ny zandary
Ny miaramila irery teo aloha no afaka manao tifi-davitra mandripaka anaty kizo. Nahazo ny fitaovana ahafahana manatanteraka ny lance-rockette koa ny zandary manomboka izao,